FBC - Baatiiwwan arfan darbanitti miseensonni garee shororkaa Ertiraa keessatti da’atan 156 harka kennaniiru
Baatiiwwan arfan darbanitti miseensonni garee shororkaa Ertiraa keessatti da’atan 156 harka kennaniiru
Finfinnee, Mudde 5, 2010 (FBC) Miseensonni gareewwan farra-nagaa Ginboot Sabaat, Adda Bilisummaa Oromoo, Sochii Dimookraasummaa Uummata Tigraay fi kaan gocha shororkaaf Eertiraa keessa da’atanii jiranii 156 harka isaanii kennuun gara Itiyoophiyaatti deebi’aniiru.
Itti-aanaan bulchaa fi Hogganaan Bulchiinsa Damee Nageenyaa Godina Tigraay Lixaa Obbo Takki’uu Matakkoo Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti miseensonni gareewwan farra-nageenyaa kunniin gara biyya isaaniitti kan deebi’an baatiiwwan afur darbanittidha.
Miseensonni kunniin gocha shororkaa Eertiraa keessatti irratti bobba’anii turan keessaa ofii isaanii baasuun biyyattii keesatti nagaan jiraachuu fi misoomsuuf barbaanneeti kan dhufne jechuun ibsaniiru.
Waggaa darbe miseensonni garee shororkaa 160 ol Raayyaa Ittisa Biyyaa Mootummaa FDRIitti nagaan harka kennuunsaanii beekamaadha.
Guyyoota Caamsaa 27 hanga Waxabajjii 2, 2009 gidduu jiranitti qofa hoggantoota olaanoo Ginboot Sabaat dabalatee hidhattoonni 48 gareen fi qofa qofaatti seenuun Raayyaa Ittisaa Mootummaa FDRIitti harkasaanii kennaniiru. Taarik Addunyaatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Kutaalee hawaasaa kuma 1 oliif yaalli baqaqsanii wal’aanuu kenname	Rakkoolee damee ijaarsaa furuuf ni hojjetama –preezdaant Mulaatuu »